Honey Badger - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
I-Honey Badger [Mellivora capensis]
I-Honey badgers iphezulu malunga ne-250 mm emadxeni kwaye i-12 Kg isisindo. Iingubo zabo zinebhola elibanzi kunye nekhosi yezinwele ezingwevu eziphuma ngaphezu kwamehlo ukuya kwisiseko somsila wazo, ohluke ngokugqithiseleyo kunye nabangaphantsi kuzo. Inomzimba ongezantsi, kunye neendlebe ezincinci kunye nemilenze ebuqilima, kwaye inamacwecwe amakhulu.
Olu hlobo lusetyenziso lokugrumba nokuchitha ixesha phantsi komhlaba, kodwa nezixhobo ezinamandla. Kuphela ngokusemhlabeni kodwa kunokunyuka, ngokukodwa xa ukhongozwa yinyosi. Ihamba nge-jog-trot kodwa ingenasiphelo kunye neendlela ezixhambileyo kude kube lapho ixhoba liqhutyelwa emhlabeni.
I-carnivore ezondla ngeentlobo zezilwanyana ezincinci, ii-scorpions kunye neempuku. Kuthiwa zitya izinto ezininzi ezifana ne-springhares kunye nenyoka. Basenokukhanda i-antelope encane ibulala ezinye i-carnivores. Umlinganiselo abatya kuwo ubusi awaziwa. Bakholwa ukuba zolathwa kwiinyosi ngeentaka zekhohla. Olu hlobo lokugqibela lufanele luvuzwe yi-honey badger ngokutshiza i-honeycomb.
I-Honey Badger kucingelwa ukuba izalisa wonke unyaka, kunye neentombi zicingelwa ukuba zineebini zamantshontsho. Uphando olusenyakatho yeKalahari lubonise ukuba amantshontsho ahlala kunye noomama ebuncinane kwiinyanga ezili-shumi elinane, ngaphambi kokuba zizimele. Oku kwahluke ngokukodwa kummandla we-Eurasian Badger onokuzimelela kwiinyanga ezi-ntathu.
UJames Stevenson-Hamilton, umgadi wokuqala wegeyimu kwi-Kruger National Park, wabhala iziganeko ezimbini epaki apho i-Honey Badger yahlasela i-Wildebeest kunye ne-Waterbuck, ngokulandelana ngokuya kwisiqu. Ngenxa yeziphumo zamathambo ezenzelwe ukuba izilwanyana zife. Akungabazeki ukuba esi silwanyana sisilwanyana esinamandla kwaye enesibindi.
I-Honey Badgers zthanda iindawo ezizimeleyo kubonakala ngokuhamba ngokukhawuleza kunye nokuthunga okuqhubekayo kwingqengqelo ezincinci kunye neendlela ezivuthayo. Kumazantsi eKalahari, i-Honey Badgers itshintshela ekubeni yinkonzo ebusika ehlotyeni kunye nobushushu busika. Nangona kunjalo, kwiindawo apho abahlali bezonyosi abachaphazelekayo ngemisebenzi yabantu baqhelekile ngokuhlwa.
I-Honey Badgers ineentlobo ezininzi zokunyamezela kwendawo yokuhlala kwaye ifunyaniswe kwiimeko ezahlukeneyo zendalo, ngaphandle kweentlango ezinkulu kunye neendawo ezifumana ngaphezu kwe-2000 mm yemvula ngonyaka.
Ukwabiwa ngokubanzi kulo lonke elaseMzantsi Afrika, kodwa engekho kwiindawo eziselunxwemeni-ntshona-ntshona.
Honey Badgers ezikhulileyo ziyabulawa yiLeopard neNgonyama. Umbala wabo omnyama nomhlophe ucingelwa ukuba unike isilumkiso kwezinye izilwanyana ezinamandla kunye nokuqina.
Uhlobo lwe-Honey Badgers lubonakala lukhuselekile kwiimvenge zeenyoka. I-Honey Badger ebanjwe ebusweni ngumqhubi omkhulu we-cytotoxic ibonisa iimpawu zobuhlungu obukhulu kodwa ibuyisela ngokupheleleyo kwiiyure ezintlanu. Olo khuselo luya kuphuhliswa ngexesha lobomi bebabi benyosi ngenxa yokuqhagamshelana rhoqo kunye neentlobo ezincinci zeenyoka, ii-scorpions kunye neenyosi.
Amathole amancinci avinjelwa ukuba abambe inyoka enetyhefu ngoomama ade abe nezakhono ezifunekayo kunye nokulungelelanisa. Nangona i-Honey Badgers ibonakala ngathi inesakhuseleko, ifunyanwa kwi-ndlu yeenyosi, ngokukodwa kwiindawo zokuloba.